eziveza konke okusemandleni Ukukhetha isevisi
amabombo Rolling ziza ezihlukahlukene izinhlobo, bobunjwa Ubukhulu. Ukwakha eziveza ilungiselelo ugingqe kubalulekile ukuba ukhethe efanelekayo eziveza uhlobo ukunquma usayizi eziveza efanelekayo. Nokho, ilungiselelo kuhlobana kanjani hhayi kuphela aqukethe amabombo ugingqe kodwa ihlanganisa izingxenye ezihambisana ne amabombo ezifana shaft kanye nezindlu. I mnandi futhi isakhi esibaluleke kakhulu ilungiselelo eziveza ngoba ukuvimbela ukuwohloka ukuvikela ukugqwala ukuze ingakuthinta akusebenzise nokwenza kwayo okugcwele. Ngaphandle kwaleyo, uphawu futhi isakhi esibaluleke kakhulu, ukusebenza okuyinto ebalulekile ukuze ukuhlanzeka igrisi. Ngaphezu kwalokho, ezinye izici eziningana ziye kumele kucatshangwe, ezifana isifuthefuthe ezifanele nasekufakazeni imvume yangaphakathi noma Layisha, amadivayisi ubambe futhi ukufakwa nokukhishwa kohlelo izindlela, njll
Ukuze ngempumelelo sakhele amakhasimende kuphoqa ulwazi olujulile ukuthi amakhasimende adinga ngokuqondile futhi kudingeka mayelana nemikhiqizo kanye namasevisi. Amakhasimende akhiqize uchungechunge enkulu imikhiqizo efana izimoto, izinto zasendlini, amaphampu kanye motors kagesi abe nezimfuneko ezithile kakhulu futhi ulukhuni mayelana nobuchwepheshe, izinga, Logistics and intengo. sikunikeza izixazululo ejwayelekile futhi ngokwezifiso ukuthi ukwazi ukuthuthukisa ukusebenza futhi, ngesikhathi esifanayo, ukwehlisa izindleko jikelele.
Custom Imikhiqizo Design
Ngamehlo ethu siyakwazi ukusebenzelana eduze namakhasimende - ngempumelelo yokuba nguzakwethu design - kuyisisekelo impumelelo Viproce sika. Onjiniyela bethu baqonde ukuthi uhlelo ngayinye ihlukile. Thina banomlando omude yokunikeza izixazululo ezintsha futhi izindleko kahle, anikeza imiklamo yakho umphetho ukuncintisana.
Viporce njalo ukwakha amabombo ekhethekile kude awanakufundwa ejwayelekile umkhiqizo line yethu. Kungakhathaliseki emincane noma emikhulu, waba nezimfanelo ekhethekile, noma esakhiwe ngezinto ezikhethekile, sinalo isipiliyoni ukuklama ikhambi elikhulu.
Ezinye izixazululo kakhulu siye eyenzelwe zihlanganisa 1mm kuya kwezingu-8 "kushaft diameters, emandleni 25,000 lbs. [11.340 kg], okushisa kusuka -320 ° F kuya 600 ° F [-195 ° ukuze 315 ° C], kumakhemikhali okungenakugwenywa kanye UV ukumelana. Ngokuvamile, izingosi ze onjiniyela bethu ukuklama ukuze lusebenze kahle, ukusetshenziswa ngokungalungile noma ukuze anakekele imfuneko ekhethekile efunwa ngabakwa isicelo noma inhlangano inqubo.
Nciphisa Import and Export yakho Izindleko
Isitifiketi Lokudabuka registratio n
Isitifiketi Jikelele lendabuko, ukubhaliswa kanye Ukukhishwa (C / O), GSP, isitifiketi lendabuko, ukubhaliswa kanye Ukukhishwa (forma, FORME)
Ukuhumusha, mail impendulo, ibhizinisi ukuxoxisana
Ukubhuka, ethwele iKhabhinethi, okwenza imibhalo amasiko isimemezelo, amasiko isimemezelo futhi imibhalo zavunyelwa
Online irekhodi, amadokhumenti, yokuqinisekisa
Document ukubuyekeza, ulwazi entry, intela imbuyiselo isimemezelo